Maxaa kajira guddigii doorashada Koonfur Galbeed inuu iscasilay? (Akhriso) – Radio Daljir
Maxaa kajira guddigii doorashada Koonfur Galbeed inuu iscasilay? (Akhriso)
Diseenbar 14, 2018 11:43 b 0
Warqoraal ah oo kasoo baxday guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay waxba ka jirin warqad lagu faafiyay baraha bulshada oo lagu sheegay inay guddiga iska casileen xilka.
Guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ayaa warqad uu maanta soo saaray ku sheegay inay doorashada dib uga dhacayn waqtigii horay loogu talagalay oo ahayd 19ka bishaan.
Dowladda Faderaalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidmada Itoobiya ayaa xabsiga dhigay musharax Mukhtaar Roobow oo bilo kahor kasoo baxsaday Al-shabaab, iminkana doonayay inuu ka qaybgalo doorashada Koonfur Galbeed.